Akụkọ - Kedu ihe ị maara gbasara isi ihe na-eto eto sunflowers?
Kedu ihe ị maara gbasara isi ihe na-eto eto sunflowers?
Sunflower bụ ụdị nke sunflower n'ime ezinụlọ Asteraceae, aha ya bụ: ifuru ọwụwa anyanwụ, sunflower, sunflower, sunflower, sunflower.Ọtụtụ ndị mmadụ eriwo mkpụrụ osisi sunflower, nke a na-eto site na sunflower, ole ka ị maara banyere isi ihe ndị na-eto eto sunflower?Na-esote onye na-eweta mkpụrụ osisi sunflower ga-ewebata isi ihe na-eto eto sunflower.
Osisi sunflower sitere na South America, ndị Spanish na-azụ na 1510 site na North America ruo Europe, na mbụ maka iji ịchọ mma.Na narị afọ nke 19, ma ewebata ya na North America site na Russia.A na-akọ ha na China.A na-akpọ mkpụrụ osisi sunflower mkpụrụ osisi sunflower ma na-eghe ya ma rie ya dị ka nri nri, nke na-atọ ụtọ.
1. Kedu ụdị ala nke sunflowers na-amasị itolite na ya?
N'ọtụtụ ebe, a na-akụ sunflower n'elu saline, aja na ala kpọrọ nkụ, tumadi n'ihi na ọ na-eguzogide ọgwụ ma dị irè karịa ihe ọkụkụ ndị ọzọ.Ọ bụ ezie na sunflower enweghị ala siri ike chọrọ, ọ nwere ike itolite n'ụdị ala ọ bụla, site na ala na-eme nri ruo nkụ, nke na-amụghị nwa na ala saline.Otú ọ dị, ikike ịba ụba nke mkpụrụ osisi ka ukwuu mgbe a na-akụ ya n'ubi nwere akwa oyi akwa, ọdịnaya humus dị elu, nhazi dị mma na ezigbo mmiri na fatịlaịza.Enwere ike nweta mkpụrụ ka mma na uru akụ na ụba dị elu.
2. Gịnị bụ dormancy nke sunflower osisi?
N'ihe banyere mkpụrụ osisi sunflower mmanụ, ezumike na-abụkarị ụbọchị 20 ruo 50 mgbe owuwe ihe ubi gasịrị.Dormancy dị mkpa n'ụzọ ndụ dịka ọ na-enye ohere ka mkpụrụ osisi nọrọ 'na-ehi ụra' ruo oge ịgha mkpụrụ.Enwere ike ịzere germination na diski n'oge oge owuwe ihe ubi mkpụrụ tozuru oke, ọbụlagodi na ihu igwe na-aga n'ihu.Oge ezumike a ga-agafe n'onwe ya mgbe owuwe ihe ubi nke afọ ugbu a na oge ịgha mkpụrụ na-esote.N'ọnọdụ ndị pụrụiche ebe a na-eji mkpụrụ osisi ewepụtara ọhụrụ eme ihe maka ịgha mkpụrụ ma ọ bụ ọrụ nyocha, enwere ike iji aka gbajie ebe ezumike.N'ozuzu, a na-etinye mkpụrụ n'ime ngwọta nke 50 ruo 100 micrograms/ml nke ethylene glycol maka awa 2 ruo 4 wee malite ịmalite n'okpuru ọnọdụ kwesịrị ekwesị.Gibberellin na-abakwa uru maka imebi ụra n'ime mkpụrụ osisi sunflower mmanụ.
3. Kedu ọnọdụ ihu igwe kwesịrị ekwesị maka ịkụ mkpụrụ osisi sunflower?
Sunflower bụ ihe ọkụkụ na-ahụ n'anya na okpomọkụ na ihe ọkụkụ na-anabata oyi nke nwere ezigbo mgbanwe maka ọnọdụ ihu igwe.Mgbe ala okpomọkụ dị n'ime oyi akwa (0-20 cm) ruru 2 Celsius C, mkpụrụ ahụ na-amalite itolite, 4-6 Celsius C nwere ike ịmalite na 8-10 Celsius C nwere ike iji maka itolite seedling.Na mgbakwunye, ntoputa seedling nwere njikọ chiri anya na àgwà mkpụrụ, mmiri mmiri, oxygen na nhazi na nhazi nke ala.
General mmanụ sunflower si seedling ka ntozu mkpa ≥ 5 ℃ irè ngụkọta okpomọkụ nke banyere 1700 ℃;sunflower oriri site na seedling ruo ntozu okè mkpa ≥ 5 ℃ dị irè ngụkọta okpomọkụ nke ihe dị ka 1900 ℃.